( ရင်ထဲက နွယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ရင်ထဲက နွယ် )	15
( ရင်ထဲက နွယ် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 19, 2015 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
ပြည့်လေစမ်းကွယ့် ပြည့်လေစမ်း ၊
manawphyulay says: နွယ်…. တစ်ပင်ထဲ ရင်ထဲက နွယ်…
ကြည့်လည်း နွယ်ဦးနော် မောင်အာဂက ဓားဆွဲပြီး ထွက်လာဦးမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အံမယ် အာဂလောက်က အေးဆေးပါ ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနွယ်က ရွာထဲက မဟုတ်
naywoon ni says: ကျိလည်း လုပ်​ကို့ဆြာ
နံမယ်​ မ​ပေါက်​တဲ့ ဖုန်းက ပိုက်​ဆံ​ပေးပြီး သူများဝက်​​မွေးခိုင်းရသလိုပဲဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အခုဟာက နာမည်ပေါက် ဖြစ်မှာလေ ဆရာနီရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဆူးလေ လမ်းမကြီးက ခိုတွေကို အစာကျွေးရင်
အတူစားခဲ့ဖူးတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို သတိရ
အော်…မိန်းမ…မိန်းမ တစ်ဖွဖွ ဂါထာကို
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်က မိန်းမဂါထာ မရွတ်ဘူး
အချစ် အချစ် လို့ပဲ တွေးတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: အောင်ပါစေ အောင်ပါစေ အောင်ပါစေ
တောင်ပေါ်သား says: အောင်ပါစေ ငွေခရုနဲ့လေ
ဟီး ဟီး ကျန်တာ မရတာ့ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1112
Ko chogyi says: တစ်ပင်ထဲရင်ထဲကနွယ်……………
အူးစည် says: ကဗျာက ရေလည် နွှဲတယ်ဗျာ.. ။ ။
သစ်ပင်မှာ အနွယ်၊ လူမှာ အစွယ်တွေလားတောင် ပေါ့..
တောင်ပေါ်သား says: ကွယ် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားထားတာကိုး
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော်လည်း ဖွေးဖွေးလေးကို နွယ်ချင်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဖျော်ဖြေရေးဝက်ဘ် ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Celebritiesတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ဗီ ဒီယိုဇာတ်ကားများ လုံးဝရိုက်ကူး တော့မည်မဟုတ်ဆိုသည့် သ တင်းမှာ သတင်းအမှားသာဖြစ် ကြောင်းဖွေးဖွေးကပြောသည်။ ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့သည့်အ တွက်လည်း ကျေနပ်ကြောင်းဖွေး ဖွေးကပြောသည်။
Myanmar Celebrities မှ မဟုတ်မမှန်သည့် စကားကို သ တင်းအဖြစ်ရေးသည့်အတွက် ဖြေ ရှင်းတောင်းပန်စေလိုပြီး ၎င်း၏ ပရိသတ်များကMyanmar Cele-brities ကို တာဝန်မဲ့လုပ်၊မလုပ် ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဖွေးဖွေးက ၎င်း၏ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်တွင်ရေးသားခဲ့ပြီး Myanm-ar Celebrities ဖျော်ဖြေရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်က ယင်းသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည့်အတွက် တောင်းပန် ကြောင်း ပြန်လည်ရေးသားထား သည်။
‘‘အခုတော့ သူတို့တောင်း ပန်တဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါပြီ။ အခု လည်း ဇာတ်ကားတွေကို စိစစ်ပြီး ရိုက်နေတာပါ။ ဗီဒီယိုတွေလုံးဝမ ရိုက်တော့တာမဟုတ်ပါဘူး’’ဟု သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး၏ မိခင်က ပြောသည်။
ပရိသတ်များအတွက် ဇာတ် ကားများအဆက်ပြတ်သွားမည်မ ဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းရွေးချယ်မှု များကြောင့် ယခင်ကထက် ဇာတ် ကားထွက်ရှိမှု နည်းသွားမည်သာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မေလတွင် ကျွန်မ က နှင်းဆီပါမောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကား ရုံတင်ပြသတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မြစပဲရိုး says: ဆေးဖက် ဝင် မဲ့ နွယ် မြက်သစ်ပင် ဖြစ်ပါစေ ကိုမျိုးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.